Wararka Maanta: Arbaco, Mar 7 , 2018-AMISOM iyo ciidamada dowladda oo iska kaashanaya howlgalo waddo furis ah
Colonel Wilson Rono ayaa sheegay in ay qorsheynayaan dib u furista waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo oo inta badan Al-shabaab ka geystaan weerarro dhabo-galo ah.
Wilson Rono ayaa sheegay in Al-shabaab looga adkaaday magaalooyinka, laakiin taa badalkeeda isku dayayaan in ay qaadaan weerarro isugu jira qaraxyo iyo kuwa gaadmo ah, laakiin wixii hadda ka danbeeya u diyaargaroobeen in laga nadiifiyo sida uu hadalka u dhigay deegaannada ay ku harsan yihiin.
Jimcihii ina dhaafay ee todobaadkii hore ayeey aheyd markii xoogag ka tirsan Al-shabaab weeraro culus ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo khasaare ballaaran ay kala kulmeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda.
Isla maalintaa Al-shabaab waxaa ay weerar ismiidaamin ah ka geysteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Laakiin AMISOM ayaa dhinaceeda sheeganeysa in dagaalo ay la galleen Al-shabaab ku dileen tiro ka badan 30 dagaalyahan, islamarkaana bur buriyeen fariisimo ay ku lahaayeen deegaanno ka tirsan gobolka Gedo.